Imvukelo yezilwanyana kwiRiphabhlikhi yaseCzech ibanjiswa kwiwebhu yobuxoki.
Emva ehlotyeni lowama-2019, iqela elincinane labavukeli base-UK beva ukuba kukho into engekhoyo kulwandiso lomzabalazo wemozulu olwalungeniswe yi-XR emhlabeni.
Imvukelo yethu yokuqala yamanye amazwe yayityhale imeko yezulu engxamisekileyo kwinkcubeko ethandwayo, kwaye sasixakekile sidibanisa ingxaki yemozulu kunye nezinye iinkqubo zengcinezelo yabantu - iingxaki zongxowankulu, nobuKoloniyalizim, kunye nolwaPatriyarchy.
Kodwa enye ingcinga yengcinezelo yayingakhankanywa. Speciesism - inkolelo yokuba olunye uhlobo lwesilwanyana lungaziphatha ngokokuziphatha luze lulawule olunye.
Uvukelo lwezilwanyana phambi kobuphathiswa bezolimo, iWarsaw, iPoland
Aba bavukeli baziva ngathi iintlobo zezinto eziphilayo zazibalulekile ekuqondeni indlela uluntu olwahlukana ngayo nendalo, indlela ingxaki yemozulu eyenzeka ngayo, kunye nendlela yokuyisombulula. Ngokucacileyo, izilwanyana zokufama yenye yezona zinto zonakalisayo kwendalo, ingcinezelo kunye nemisebenzi yokuchitha impucuko yethu iyayenza, kwaye inegalelo elikhulu ekukhutshweni kwegesi eluhlaza.
Ke babumbaImvukelo Yezilwanyana, iqela lodade kwi-Extinction Rebellion, eligcina inkcubeko yethu, amaqhinga, kunye neemfuno - kodwa ngokudibanisa okuncinci. Imfuno yabo yesi-2 ngokucacileyo ibize ukuphela kwezolimo lwezilwanyana kunye namashishini okuloba.
Namhlanje izahluko zemvukelo yezilwanyana ziyasebenza ngaphezulu kwamazwe angama-30, kubandakanya iSpain, iMexico, kunye Taiwan, kwaye intshukumo iyakhula kuyo yonke imimandla yehlabathi. Baye bajolisa kwi-agri-conglomerate, bavimba inyama yokuxhasa iipalamente, kwaye bakhankasela ukutya okutyalwa ezikolweni-ngezenzo ezibandakanya ukusebenzisana kwamazwe aphesheya kunye nokukhankasela ecaleni ne-XR.
Imvukelo yezilwanyana eTaiwan imatshi yemozulu kunye nobulungisa bezilwanyana
KwiZenzo eziPhambili ungabona ukuba ezi ntshukumo zimbini zenze njani umanyano lwabavukeli ukumilisela uQhushululu lwentwasahlobo eNetherlands, kwaye ufunde okungakumbi ngombono woVukelo lweZilwanyana kuluntu olusekwe kwizityalo kwi-Must Reads.
Kwenye indawo kulo mbandela sinengxelo yesenzo sehlabathi esijolise koonozakuzaku baseNorway ukuqaqambisa ukuba urhulumente uhlamba uhlaza. Sikwaphinde sigubungele uqhankqalazo lwedijithali kwiiPhilippines apho abavukeli belwa ukumisa iprojekthi yedama eza kutshabalalisa indalo.
Njengomnye major report lands ngesigwebo sokuba oorhulumente bethu bayasilela ukulungisa imeko yemozulu, kufuneka sisebenzise amandla abavukeli abaninzi ukuzisa utshintsho lwenkqubo sonke esiyifunayo, nokuba kukho umahluko malunga nokuba sifika njani.
Njengoko iMvukelo yokuQobuka isiya isiba yintshukumo yeentshukumo, kuya kuba njalo nakwincwadana. Siyathemba ukuba uyalonwabela utshintsho lwethutyana kumbono oziswe ngumcimbi wokuVukela kwezilwanyana.
Ukuba ungathanda ukunceda, nceda ujonge yethu website kwaye learn more about XR.
Ukunxibelelana nabavukeli kwindawo yakho yengingqi, nxibelelana neqela nearest XR group. Ukuba akukho qela lisebenzayo kufutshane nawe, unga start your own!
Ukuba ungathanda ukubona imicimbi yeendaba zangaphambili, ungazifumana here.
Sikwinqanaba elibalulekileyo kwimbali yoluntu, kwaye iMvukelo yethu ifuna imali ukuze umyalezo wethu uviwe. Nantoni na onokuthi give iyaxatyiswa.
Intwasahlobo yetyala loMbutho woMvukelo
I-XR Amsterdam kunye noVukelo lweZilwanyana baqalisa isenzo sabo sokuqala sokulungelelanisa ukukhaba iMvukelo yeli lizwe.
Abavukeli kuwo omabini la maqela benza ibhloko yokuhamba esixekweni, bejolise kwindlela enkulu egcwele iitram kunye nezithuthi eziholele embindini wayo. Phantse i-100 yabavukeli babekhona, nentshukumo nganye izisa iimpahla zabo, iibhanile kunye nesimbo. Abavukeli be-3 XR bahamba ze, ngamnye ephethe i-XR ebanga esifubeni sakhe ukuqinisekisa ukuba umyalezo othile wenza ukuba ungene kumaphephandaba. Imvukelo yezilwanyana okwangoku yayinabavukeli abanxibe njengeenyosi kunye neenkomo kunye neenkuku.
Kodwa amapolisa aseAmsterdam ayekulungele kwaye elinde kwinqanaba lokuqala elikhulu. Bavala umngcelele kwaye babhengeza ukuba nabani na ohleli apho uza kubanjwa. Malunga ne-2 / 3rds bakhetha ukungasinanzi esi silumkiso kwaye bathwalwa ngamapolisa bayokuma kwiibhasi ezilindileyo, emva koko babaqhubela ngaphandle kwedolophu apho babelahlwe khona kwathiwa mabagoduke.
Abavukeli abapeyintwe ngomzimba baqinisekisa ukuba iimfuno zethu ezi-3 zibonwe ngabo bonke.
Eli qhinga lokuchola kunye nokulahla lilungiselelo elitsha kunye neluncedo kuwo onke amaqela. Imifanekiso yabavukeli ababanjiweyo bayenza kumajelo eendaba, kodwa abavukeli abathathi nasiphi na isithuba esisele sinomda ngokuqatha ngenxa yezithintelo zecovid. Ngelixa uqhankqalazo lwalo naluphi na ubungakanani lusemthethweni eNetherlands, ukuphambuka kwezentlalo kuyasebenza, kwaye kukho ixesha elimiselweyo lokubuya ekhaya ngentsimbi ye-9.
Abavukeli abasindileyo kwiibhasi zamapolisa badlulela eMuseumplein, indawo enkulu kawonkewonke, bevalela izitalato nge 'mini-swarms' apha endleleni. Emva kweeyure ezimbalwa baphinde bazimanya neebhasi zabo eziphume kumaqabane abo, ababebuyele kumbindi wesixeko. Kodwa bahlala umanyano ixesha elide.
Umdibaniso wabavukeli udibana nobukho besipolisa obunzima Photo: Isa Herzet
Njengokuba umngcelele usiya kwindlu ye-Opera kaZwelonke, indawo yoqhankqalazo esele ihlelwe ngabasemagunyeni, amapolisa abavalela kwakhona, kwaye abanye abavukeli abangama-40 balayishwa ezibhasini basiwa edolophini.
Imvukelo yasentwasahlobo izakuqhubeka okokoko eAmsterdam, eRotterdam, eUtrecht, naseTilburg kude kube ngu-Epreli, ngezenzo ezonyukayo ngamandla kunyulo lukazwelonke phakathi ku-Matshi.
Emva konyaka usebenze ngokuzimeleyo ngokuzimeleyo, bobabini ukuVukela kwezilwanyana kunye ne-XR Amsterdam bonwabe kakhulu ngomanyano lwabo oluqhakazileyo, kwaye sele beceba ukucwangciswa ngakumbi kwezenzo kulo nyaka uzayo.
I-XR eNorway yamkela iNkxaso yeHlabathi kunye nabantu beShephu
4 MARCH | Ehlabathini jikelele
Abavukeli kwihlabathi liphela beva umnxeba weXR Norway. Babonisa ngaphandle koonozakuzaku baseNorway kwizixeko ezingama-26 kuwo onke amazwekazi amahlanu, ngelixa abavukeli e-Oslo babiza isihlwele sabantu abanekhephu ukuba bavimbe iSebe lezoBulungisa.
Isenzo sehlabathi saququzelelwa ukugweba uhanahaniso lwemozulu kurhulumente waseNorway kunye nokuphendula okungqwabalala kukarhulumente ukungathobeli kwasekhaya.
Esi sigwebo sivela kwiindawo ezikude njengeBrazil, Canada, South Korea naseUganda. Abavukeli baseSweden eMalmö bade banikezela urhulumente waseNorway ngeBhaso likaNobel lohanahaniso kumsitho okhethekileyo.
Abavukeli baseMzantsi Korea ngaphandle kwonozakuzaku waseNorway eSeoul
Urhulumente waseNorway uceba ngokusesikweni ukuba angathathi cala kwikhabhoni ngo-2030, kanti kwangaxeshanye upompa imiphanda ezizigidi ezi-2 zeoyile ngosuku, coming 2nd only to Russia for the title of Europe's biggest oil producer. In Oslo there are izibane ezitalatweni ezihlakaniphile Izinto ezinokuphinda zisebenze ngokuzenzekelayo xa izitrato zingenanto, kodwa ezi zinto zithunyelwa ngaphandle zeoyile azifakwanga kukhutshwa kommandla waseNorway.
Kunyaka ophelileyo, intsimi yeoyile efanelekileyo "enobushushu bemozulu" avulwa nguNdunankulu, owathi ngekratshi ukuba lo msebenzi unikwe amandla amandla ahlaziyekayo kwaye ke "kuncitshiswe ukukhutshwa".
Umbuso awuthathi kakuhle kwiinzame ze-XR zaseNorway zokubonisa uhanahaniso olucacileyo. Ngexesha lokuvalwa kweSebe lePetroleum kunye naMandla ekwindla ephelileyo, amapolisa abamba phantse bonke abavukeli ababethathe inxaxheba, abagcina eluvalelweni lodwa ubusuku bonke, emva koko abahlawulisa isigidi esinye seNorway kroner, malunga ne-100,000 euros.
Ngelixa abavukeli baseNorway beqonda ukuba unyango lwabo ngurhulumente luselungelweni lokuthelekiswa nolawulo lobuzwilakhe kwenye indawo, impendulo ecokisekileyo yamapolisa kunye nezohlwayo ezikhubazekileyo zenza ukuba kube nzima kakhulu ukungathobeli eluntwini eNorway. I-XR eNorway ngoku iqhuba i-fundraiser ukunceda abo bavukeli abangama-53 bahlawuliswa ngoqhanqalazo loMphathiswa ukuwa kokugqibela.
Abantu beSnowpe bathintela ukuphuma kweSebe lezoBulungisa kodwa bathintele isohlwayo Ifoto: XR Norway
Kungenxa yesi sizathu le nto abantu bekhephu babeqeshelwe i-Ofisi yoMphathiswa Wezobulungisa ukuvimba e-Oslo kunabantu. Njengoko omnye umvukeli waseNorway ebeka, "amadoda ekhephu awanakuhlawuliswa".
Ukulinganisa i-50 ukuya kwi-60 kilos inye, nazo azinakushukunyiswa ngokulula. Amapolisa abavavanye, kodwa akazange angenelele ngelixa babehonjiswe ngeminqathe, iminqwazi kunye neeplacards kwisandi somdlalo bhanyabhanya 'Frozen'. Akukho mntu wahlawuliswa ekugqibeleni.
Nangona i-XR eNorway ibinqwenela ukuba kungasasazwa iindaba ngezenzo zabo, babenombulelo kwaye bachukumiseka kakhulu yiyo yonke inkxaso abayifumene kwilizwe jikelele.
Imbasa kaNobel yomsitho wokuhanahanisa eMalmö, eSweden
I-Digital Strike ibeka iHole kwisiCwangciso seDama lasePhilippines
I-XR Philippines idibene ne-Stop Kaliwa Dam Network kunye neProjekthi 19 ukuphakamisa ulwazi malunga nemiphumela emibi yedama elicetywayo kwiintaba zaseSierra Madre.
Iphulo labo lalibandakanya iiposti zemithombo yeendaba zentlalo, i-infographics, ubungqina bevidiyo, a ‘water for all’ webinar, and a petition. Iqukunjelwe ngesitrayikhi sedijithali kwi-Instagram, Facebook nakuTwitter ngamaqela olutsha.
Idama laseKaliwa liza kutshabalalisa indawo yokuhlala yezilwanyana eziyi-126 kwiihektare ezingama-300 lize libeke abahlali abayi-100,000 ezantsi kumngcipheko wezikhukula ezimandla. Ukwaphula noMgaqo-siseko wasePhilippines kunye namalungelo nemihlaba yookhokho abangama-5 000 abantu baseDumagat-Remontados ekufuneka bekhuselwe nguMthetho wamaLungelo abaNtu (IPRA).
Abantu bomthonyama beqhankqalazela iprojekthi yeDama laseKaliwa. Ifoto: Maria Tan
Idama linokwenzeka kuphela ngemali mboleko evela e-China ezizigidi ezingama-210, ithwalisa bonke abantu amatyala ngelixa inyusa unikezelo lwamanzi kubahlali besixeko saseManila. Imigaqo yemali mboleko ivumela iChina ukuba isombulule iingxabano malunga neprojekthi isebenzisa umthetho waseTshayina.
Konke oku kutshatyalaliswa kwedama elinokuphila iminyaka emi-5 ukuya kwezi-6 kuphela ngenxa yenqanaba eliphezulu lentlenga kule ndawo, naxa izisombululo ezingcono zamanzi zikhona. Kungabiza ixabiso eliphantsi kwaye kuzinze ngakumbi ukulungisa kunye nokuphucula amadama akhoyo kunye nonikezelo lwamanzi, amkele imigaqo-nkqubo yolondolozo lwamanzi, okanye aseke ulawulo lwamahlathi olusekwe eluntwini.
Iprojekthi yeDama laseKaliwa isongela iintlobo ezininzi zezinto eziphilayo ezibandakanya ukhozi lwasePhilippine olusengozini. Ifoto: Cornell Lab yeOrnithology
I-XR Philippines kunye namanye amaqabane ephulo aya kuthatha isikhalazo kwiKhomishini yoTshintsho lweMozulu ePhilippines kunye ISebe lezeNdalo kunye neMithombo yeNdalo ukuqaqambisa iziphene zedama kunye nokwakha amandla okuthatha amanyathelo asemthethweni.
Amaqela emveli abandakanyekayo ajongene nomceli mngeni wokuhlala ekhuselekile kwindyikityha yokufa ngelixa eme ngenyawo ngokuchasene nedama. Bajongene nengozi enkulu kurhulumente wabo, kuba umthetho wobunqolobi wasePhilippines ubiza abo bakhusela indalo njengabanqolobi. Abavukeli bebesoloko bezama ukunceda ukwandisa amazwi abantu basekuhlaleni abanezona zinto ziphulukene nazo kunye nezona zimvo zilungileyo zokusombulula le ngxaki yamanzi.
24 FEB | NAMIBIA: ngoLwesihlanu For Ikamva - Windhoek kunye namahlakani asondele Indlu yoWiso-mthetho yeSizwe ukuba ihambise incwadi isiya kurhulumente wabo ifuna ukuba ipheliswe kwangoko ipetroleum kuphononongo kwi-Okavango Delta yiReconAfrica.
15 FEB | Petah Tikva, Abaphembeleli bovukelo lwezilwanyana kwa-Israyeli baqhankqalaza kwiziko lolungiselelo lwengxilimbela yobisi uTnuva. Iifoto: Imvukelo Yezilwanyana
3 MAR | UK: Imvukelo yezilwanyana 'iphinda ibuyise' inani lezaziso zikaMcDonald kumbindi weLondon.
8 MAR | Cape Town, South Africa: Abavukeli bayayikhathaza i-Standard Bank ukuzama ukuyinqanda ekuxhaseni ngezimali i-East Africa pipeline oyile.
Kwakhona sinezenzo ezininzi kakhulu kwincwadana enye. Ngaba ufundile nge-XR engabotshelelwa kuzo zonke ezo zinto zintle kunye nesibindi esingenakulunga kulo mbandela.
Imvukelo yeSayensi yeHlabathi: Iintsuku ezi-4 zokuSebenza ngokuthe ngqo
25 - 28 MARCH | Ehlabathini lonke
Inzululwazi Yovukelo icela izifundiswa kunye nososayensi kwihlabathi liphela ukuba bagqithe ekunikeni izilumkiso eziwela ezindlebeni ezingevayo. Yenza ngokungathi inyani iyinyani kwaye usijoyine iintsuku ezi-4 zokuthatha amanyathelo ngokuthe ngqo.
Siza kuncamathisela amaphepha enzululwazi kwizakhiwo ezikumaqela amancinci, ekuhlaleni.
Siza kuhamba ngeentsuku ezi-1 ukuya kwezi-3 ngendlala ukuba asinakuba sengozini yokubanjwa / siphume endlwini kodwa sisempilweni.
Siza kubonelela ngezixhobo zokungathobeli kwezemfundo ukuze ukufunda okucwangcisiweyo kuthathwe endaweni yezifundo kwintlekele yemozulu.
Sign up kunye noncedo ukwenza oku ngokugaya kunayo-kuse ephakadeni zesayensi ngqo isenzo.
Imvukelo Yemali Yehlabathi!
1 APRIL | Ehlabathini jikelele
Sijoyine nathi kumzabalazo wehlabathi ojolise kwiintsika zamandla.
Abavukeli kunye namaqela adibeneyo kwihlabathi liphela ayamenywa ukuba athathe inxaxheba kumhla wezenzo ezonyukayo ezijolise kwiibhanki nakumaziko emali.
Ungathatha inxaxheba kolu tshangatshangiso lwehlabathi nokuba uphi. Funda oku iPhiko leNtshukumo ukufumana ezinye izimvo kunye nemiyalezo ehambelanayo ukuze ikukhuthaze, ujoyine imvukelo yehlabathi usasazo ngetelegram / incoko, kwaye ujonge eyethu imicimbi yephepha.
Abantu abamanyeneyo, abanakuze boyiswe.
XR COP: INgxowa-mali yoSuku lwaManzi lweHlabathi
By 15 MAR | Kwi-Intanethi
Amaqela e-XR e-Afrika acwangcisa uthotho lwezenzo zoSuku lwaManzi lweHlabathi ukuqaqambisa ungcoliseko lwamanzi kunye nokusilela ukufikelela kumanzi acocekileyo, nakhuselekileyo.
I-XR COP ibongoza abaxhasi bentshukumo yemozulu ukuba bancede ingxowa-mali ezi zenzo zingama-20 + ezibandakanya ukucocwa kwemilambo, iinkomfa, ukubuyiselwa kwemithombo kunye nokufakwa kwetanki lamanzi.
Izenzo ikakhulu zijolise ekwaziseni nasekunyuseni ukomelela koluntu ekujonganeni neendlela zemozulu eziya zisanda ngokwanda ngenxa yokonakala kwemozulu.
USuku lwaManzi lweHlabathi lungoMatshi 22. Ingxowa-mali yethu izophela nge-15 kaMatshi.
Ukukhokelela kuMhla waManzi weHlabathi, i-XR COP izakupapasha [amabali](https://xrscotland.org/2021/02/argentinian-activist-esteban-on-how-to-build-climate-action-in-global-solidarity /) malunga nabantu abakwindawo eziphambili emhlabeni abalwa ukugcina amanzi abo ecocekile kwaye efikeleleka. I-XR COP iyakuxela bukhoma ngalo mhla kwaye ipapashe amabali anzulu malunga nesenzo kwezi ntsuku zilandelayo.
Usuku lwaBasetyhini lwaMazwe ngaMazwe: Abafazi Abavukelayo
8 MAR | Kwi-Intanethi
Umsunguli we-Extinction Rebellion Co-Clare Farrell ubamba i-1 iyure bukhoma kunye noHowey Oe, umhlaseli wokuqala wemozulu waseChina, umyili wefashoni waseNamibia kunye nomzobi u-Ina-Maria Shikongo kwiphulo lakhe lokumisa i-Okavango Delta, kunye no-Angie Zelter, itshantliziyo lase-UK elithe labanjwa ngaphezulu kwama-200 kwaye wachitha iminyaka emibini entolongweni ngenxa yobundlobongela. amanyathelo ngqo.
XR Global Blog: Amanqaku amatsha Ahoy!
Amanqaku amatsha ama-3 asandula kulayishwa kwiBlogi ye-XR yeHlabathi. Kutheni ungabi nantloni.
Iintlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo: Yintoni le, Kutheni le nto siphulukana nayo kangaka kwaye kutheni kubalulekile?
Inkcazo ecacileyo yokwahluka kwendalo kunye nokuba ilahleko yayo inokuba yingozi njani kwiplanethi yethu.
Ityala Lezobulungisa Kubabaleki Kwimozulu
Ukonakala kwemozulu kuqhuba abantu kumakhaya abo. Kwaye ukuba ucinga ukuba yingxaki nje yehlabathi ekhulayo, cinga kwakhona- eli nqaku linesifundo esivela kwindawo ongalindelanga.
Isikhokelo sokuBanjwa kweCarbon kunye nokuGcina
Ukubanjwa kweCarbon kuthetha ukufunxa ikharbhon emoyeni, akunjalo? Akulunganga! Funda eli nqaku lilungeleleneyo kwaye uya kuba nakho ukwenza ingxoxo enolwazi nokuba yeyokuchasana neCCS.
I-XR Podcast: Abakhuseli bomthi
Kwinyanga ephelileyo i-XR podcast ikhutshelwe ngumphulaphuli wayo we-250,000! Ndiyakuvuyela iqela!
Sabo samva nje isiqendu kudliwanondlebe kunye nabakhuseli bemithi aba-2-omnye umntu ophambili kwi-HS2 yamva nje Uqhankqalazo olubandakanya iitonela phantsi kweLondon, omnye umvukeli obesebenza noluntu lwemveli e-Ecuador.
Uvukelo lwezilwanyana luyavela kwakhona kwiCzech Republic.
Ngubani uvukelo lwezilwanyana? Yintoni iintlobo zezinto eziphilayo? Kutheni ulimo lwezilwanyana lusoyikeka kangaka? Banokutshintsha njani abalimi kuyo kwaye baqhubeke nokuphila kamnandi? Siza kwenza ntoni ngawo onke amasimi angenanto? Ngaba sonke kufuneka sibe vegan? Iimpendulo zababavukeli bam! Iimpendulo zingezantsi!
Medium: Who is Animal Rebellion?\_ A short article about how Animal Rebellion started and what it’s like being a member.
Medium: Now it is Time to Address Speciesism\_ An article about how speciesism (the treatment of one species as morally superior to another) is key to understanding how the climate crisis happened and why Animal Rebellion is needed.
Youtube: George Monbiot’s Smithfield Speech (26 mins)\_ A brilliant speech by the British journalist and writer during Animal Rebellion’s blockade of a London meat market. Monbiot chronicles his gradual realisation that no matter how you tweak it, animal agriculture destroys ecosystems and has to be stopped.
Vimeo: 73 Cows (dir. Alex Lockwood, 15 mins)\_ A moving short documentary about an English beef farmer who transitioned his farm to sustainable, organic, plant-based agriculture.
Harvard Law School: Repurposing UK Agricultural Land to Meet Climate Goals\_ A study showing how if land used for animal farming was turned back into native forest, the UK could align its emissions with commitments made under the Paris Agreement.
I-Recipe Corner: Uvukelo lwezilwanyana lujolise kutshintsho lwenkqubo, hayi utshintsho lomntu, ke aliceli malungu alo ukuba abe vegan. Kodwa ngokuqonda ukuba izidlo ezisekwe kwizityalo zinokuba mnandi kakhulu, kutheni ungajongi ezi ndlela zokupheka iqela lethu leendaba liqhubeka libuyele kulo…
Oku kunokubonakala njengokungaqhelekanga, kuba ayijolisanga kwimozulu, kodwa kumxholo wale nyanga yoVukelo lweZilwanyana, ilungile. Le ncwadi ibuza umbuzo obonakala ulula: "singatya ntoni?" Impendulo isongelwe kwinkcubeko, ezoqoqosho, imigaqo yokuziphatha, ulawulo lomhlaba, ulondolozo lwendalo, ewe, ukusinda kwabantu.
I-Pollan iphonononga konke oku ngokusebenzisa izidlo ezine ezimele, ngokwahlukeneyo, ezolimo kwimizi-mveliso; Iindidi ezimbini ezahlukileyo zolimo lwasimahla; nokuzingela nokuqokelela. Uthenga i-steer, axhele inkukhu, ngokufutshane atye imifuno, ahambe ayokuzingela iinkunzi zasendle. Nangona uPollan ekhupha iingcebiso, incwadi yakhe ayisiyiyo ingxoxo echaziweyo kwaye ingumsebenzi wokuzibandakanya kunye nokufundisa wobuntatheli bokuqala.
Nazi ezinye iincwadi ezimbalwa ezinconyelwe sithi nabafundi ...
UPeter Singer yenye yeefilosofi zokuziphatha ezikhokelayo kwihlabathi kwaye le ncwadi ifundeka kakhulu, eyapapashwa ngo-1975, ithathwa ngokubanzi njengengxelo yesiseko sefilosofi malunga nokuphila kunye nokunyangwa kwezilwanyana ngabantu, kubandakanywa nezolimo zezilwanyana kunye nokuvavanywa kwezilwanyana.
Ngokujika ngokuhlekisayo nangothusayo, le noveli inobuqaqawuli kunye ne-satirical inika imboni yenyama yenkomo yase-US kwimbono yenkcubeko yaseJapan naseMelika, igqibelele ngolimo lweTV kunye nefektri, uthando, ukuchuma nokuba ngumama.
Incwadi yabantwana ethandekayo, erekhodiweyo malunga nobuhlobo phakathi komntwana kunye nomnenga njengoko befunda malunga nengozi yongcoliseko lweplastiki. Bukela-iincwadi ezininzi zabelana ngesi sihloko, jonga igama lombhali.
Ukuqhubeka nokugxila kwethu kwezolimo lwezilwanyana, incwadi kaCronon idibanisa imbali kunye ne-ecology ukuchaza utshintsho phakathi kolunye uhlobo lolawulo lomhlaba kunye nolunye. Isifundo esigqwesileyo semeko yenkcubeko, uqoqosho kunye nezopolitiko ezendele nzulu esiqhubeka nokusilwa nazo namhlanje.
Kulungile, le nto ayinanto yakwenza nezilwanyana-yincwadi yesilumkiso malunga ne-geoengineering-kodwa kuwo wonke umntu obhale ekuncomeni iincwadi kule nyanga, phantse isiqingatha sakho sicebisile le. "Njengokuba (iinkokeli ezinenjongo entle) kuyo yonke indawo zibamba 'izilungiso' ngokukhetha indlela yokuziphatha / utshintsho lwenkqubo, abafundi beXR banokukhunjuzwa ngokufanelekileyo ngeziphumo eziyingozi 'ze-geoengineering'" (David)
Abantu beXR: UAntoly, uSirayeli
Uphawu luka-Anatoly: 'Siza ngoxolo' Ifoto: Lior Klein
Ngaphezulu konyaka ophelileyo, kubonakala ngathi yiminyaka ngoku, abahlobo bathetha kum intlanganiso enxulumene nemozulu kunye nokuphela, kunye nentshukumo ethile endandingekaliva igama langaphambili.
Ndifuna ukwazi, ndazifumana ndilapho, ndaziswa kwiXR. Ukungxamiseka kwale meko kwakothusa, kodwa kucace gca. Umhlaba wethu uyafa, kwaye sinoxanduva. Kufuneka senze okuthile. Ndimele ndenze. Kwaye izimvo zokwabiwa kwabasemagunyeni kunye ne-Nonviolent Direct Action (NVDA) yandikhuthaza kwangoko.
Ndingathanda ukuhlala kufutshane kakhulu nendalo, kwindawo encinci, kwaye ndingazikhathazi ngayo nayiphi na enye into. Kodwa ndifumanisa ukuba andinakho ukungahoyi imozulu kunye nendlela esiyitshabalalisa ngayo thina bantu. Andikwazi ukulala kakuhle ndisazi iplanethi yethu ethandekayo, ekuphela kwekhaya lethu, liyatsha, kwaye andenzi nto ingako ukumsindisa.
Ke, ndilapha. Kwi-Action kunye neLogistics, kwiqela lam lasekhaya / lengingqi, kubuvukelo bezilwanyana nayo ... kuba sisilwanyana esinye nje phakathi kwezininzi. Kodwa into endiyithandayo ngumsebenzi weNkcubeko yokuHlaziya. Ukukhuthaza unxibelelwano olunzulu loxolo olunentsingiselo nolwethu, kunye nomnye, kunye nendalo yomama. Olu hlobo lokuphila kakuhle / lokukhathalela ngumnqweno wam ongaphandle kweXR nawo, ke oko kubonakala kufanelekile. Kwaye ukuba besinayo kwasekuqaleni, yonke le ntlekele yemozulu ibingazukwenzeka ... ukutshintsha ngokupheleleyo inkcubeko yethu kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba ayiphindi yenzeke.
I-NVDA inika amandla! Ndimele ukuzimela ngokwam kunye neplanethi. Ngobukho bam nje, ukukhuthaza abantu (ngethemba kubandakanya abenzi bezigqibo) ukuba bafune oku kuthamba ngaphakathi kweentliziyo zabo, kubutyebi bonke bobomi, benze izigqibo zopolitiko nezemali nezombutho ekufuneka zenziwe ukuze zisisindise. Kodwa i-NVDA inokuba noxinzelelo, yoyike, idinise. Andinakuyenza ngaphandle kwenkxaso enothando yabahlobo kunye nabanye abavukeli. Ngaphandle kwexesha elinikezelwe kumbhiyozo, ukuphumla, ukucula, ukukhangela umphefumlo, umbulelo.
Kwinyanga ephelileyo besinentshukumo, eyona inkulu kwaye inesibindi esithe sayenza. Ndiye ndachitha usuku ngaphambili, ngoncedo oluxabisekileyo oluvela kubahlobo bam, ndisenzela abantu abangama-40 isidlo se-vegan, ukuba batye phakathi koqeqesho kunye nesenzo. Bendingaphekanga ixesha elide, ngakumbi ndinga phekeli abanye abantu, ke oku bekumnandi kwaye kuyonwabisa! Ngosuku olulandelayo, emva koqeqesho, ndaya apho ukutya kulindwe khona. Oogxa bethu sele befudumeze konke ukutya bakufaka ezimbizeni nasezityeni, kwaye wonke umntu ebesitya ethetha kwaye ebhuza. Elo thuba, lokunika ngothando, lalixabiseke kakhulu kum. Kula maxesha oxinzelelo phambi kwentshukumo, ukubona wonke umntu eyonwabela loo nto, kwakumnandi kakhulu.
Ukuba uyazi (okanye) ungumvukeli naphi na emhlabeni onebali onokuthi ulixelele, nxibelelana naye ku- [xr-newsletter@protonmail.com](mailto: xr-newsletter@protonmail.com)
Kukho ama-35 kuphela eScottish Wildcat aseleyo, kwaye bajongene nokutshabalala ukwenza ifama yomoya. Nceda iHavecat yasindisa izilwanyana zasendle ngokusayina esi sicelo.
Enkosi ngokufunda, mvukeli. Kwaye qhubeka nomsebenzi olungileyo! Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ingxelo, sifuna ukuva kuwe. Nxibelelana ne- [xr-newsletter@protonmail.com](mailto: xr-newsletter@protonmail.com).
Sikwinqanaba elibalulekileyo kwimbali yoluntu, kwaye intshukumo yethu ifuna imali ukwenza umyalezo wethu uve. Nantoni na onokuthi uyinike iyaxatyiswa.